Iwu: Mmekọahụ na Scotland | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Iwu Mmekọahụ n'okpuru iwu nke Scotland
“Mmekọahụ” abụghị okwu iwu. Mmekọahụ bụ “Onweputara ihe omimi nke nwoke”Rụrụ tumadi site na smartphones. Ka ọ dị ugbu a, enwere ike ịkatọ omume "mmekọahụ" nke ụdị dị iche iche na Scotland n'okpuru otu n'ime ọtụtụ ụkpụrụ ma bụrụ okwu esemokwu. Akụkụ iwu ndị dị n'elu bụ isi ndị nwere ike iji ndị ọka iwu mee ihe. Ihe ọ bụla anyị kpọrọ ya, 'izigara' mmadụ ozi bụ isi ihe ụmụaka na ndị okenye mere. Naanị n'ihi na nwatakịrị kwere ka ịme ihe ma ọ bụ zipu ihe oyiyi, emeghị ya iwu. Mpụ imebi iwu nke Cyber ​​bụ otu n'ime ngalaba mpụ na-eto ngwa ngwa taa.
Nmebi nke ichu ahihia bu ịbanye n'ime omume ebumnobi nke ime ka itu egwu na mkpu. Niile ma ọ bụ akụkụ omume ahụ nwere ike ịbụ site na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ jiri saịtị mgbasa ozi na -ebipụta akwụkwọ gbasara onye ahụ.Ọ na-abụwanye ihe a na-ahụkarị n'etiti ụmụaka. Ọ pụtaghị naanị ịbanye na mmadụ.
Onye isi anyị, Mary Sharpe, bụ onye otu Ngalaba nke Ndị Nkwado na nke College of Justice. Ọ nwere ahụmahụ nke iwu omempụ na ndị ikpe na ndị na-agbachitere. Mary Sharpe dị ugbu a na ndepụta ndị na-adịghị eme ihe mgbe ọ na-etinye aka na ọrụ ebere. Ọ na-enwe obi ụtọ ịgwa ndị nne na nna, ụlọ akwụkwọ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'ozuzu ha gbasara ihe bara uru nke ahịhịa na iwu gbasara ịkwa iko metụtara mmekọahụ. Ọ gaghị enwe ike ịnye ndụmọdụ gbasara iwu gbasara okwu ụfọdụ.
Iwu omempụ na Scotland dị iche na iwu dị na England na Wales na Northern Ireland. Lee nke a isiokwu banyere ọnọdụ ebe anyị na anyị Page n'elu ya. Ndị ọrụ iwu na-ahụ maka mkpesa nke ndị agụmakwụkwọ na ndị nta akụkọ na-akpọ "mmekọahụ" dị ka mpụ ọ bụla ọzọ. Ha na-eme nke a n’otu n’otu. Undermụaka nọ n'okpuru afọ 16 ka a ga-atụgharịrị gaa na Usoro Ntị Childrenmụaka. Na mmebi iwu dị oke njọ dịka ndina n'ike, ụmụaka nwere afọ 16 nwere ike ijikwa ya site na usoro ikpe ikpe mpụ na Courtlọikpe Dị elu nke Justiciary.
Ọ bụrụ na a mara mmadụ ikpe metụtara mmekọahụ, ahịrịokwu dị iche iche. Ha ga-etinye ngosi na aha ndị na-edina ndị na-enwe mmekọahụ maka afọ 16 ndị ahụ ma gafee hazie n'ụlọ ikpe ndị omempụ.
Maka ụmụaka na-erubeghị afọ 16, a ga-eleda mmejọ iwu anya dị ka "ikpe" maka ebumnuche nke Rehabilitation of Offenders Act 1974 n'agbanyeghị na akpọghị ya n'ime Usoro Ntị ụmụaka. N'okpuru ọhụrụ Ngosipụta (Scotland) Iwu 2020, ndị na-eto eto agaghị achọ igosipụta mmejọ ndị dị otú ahụ mgbe ha na-achọ ọrụ ọ gwụla ma ha chọrọ iso ndị dị egwu gụnyere ụmụaka. Mgbe ahụ, enwere ike ịkọwa mmejọ mmekọahụ na akwụkwọ ngosi. Ndị nne na nna kwesịrị ịchọ ndụmọdụ gbasara iwu gbasara ndokwa ọhụrụ ndị a.
Mmetụta dị irè nke mmejọ mmekọahụ na ọrụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na njem maka onye nọ n'okpuru, yana karịa 16, dị mkpa na obere nghọta. Nke a bụ ikpe site na 2021 mgbe a jụrụ arịrịọ nke otu nwa akwụkwọ iwu Edinburgh ka ewepụrụ aha ya na ndepụta ụmụaka maka mmejọ mmekọahụ mgbe ọ dị afọ iri na ụma.
Site n'akụkọ ikpe ahụ: “A mara onye na-achụ ya ikpe n'okwu atọ n'okpuru Mmekọahụ Mmekọahụ (Scotland) Act 2009 ke October 2018. Mmejọ ndị ahụ yiri nke ọma n'uju, nke metụtara onye na-achụ ya itinye aka ya na ara, ụkwụ, na akụkụ ahụ nke ndị na-eme mkpesa na uwe ha, ma megidere ụmụ agbọghọ atọ na-eme mkpesa. N'oge mmejọ ahụ, ndị mkpesa ahụ dị n'agbata 13 na 16 na onye na-achụ ya dị n'agbata 14 na 16. Mmejọ ahụ mere na ebe ọha na eze ma kọwaa ya dị ka ihe metụtara "ike, njikwa, na omume aghụghọ". “
Ọ bụ ezie na ikpe a emetụtaghị mmejọ mmekọahụ, otu nchegbu ahụ gbasara ike, njikwa na nchịkwa nwere ike ịdị na nke ịkwa iko.
Na mkpokọta, nkwenye nwata, gụnyere ihe ejiri si na sistemụ ụmụaka, agaghi egosiputa ya na ndị ga-ewe gị n'ọrụ ma tozuo maka nyocha nke onwe site na Courtlọikpe Sheriff. Usoro ikpeazụ a ga-abụ na mmefu nke onye ahụ na-eto eto.
Ka iyi ọha egwu na iyi egwu mmekọahụ na-akawanye njọ, ndị isi ndị na-ekpechite ọnụ na-emekwu ihe ngwa ngwa. Ndị nkuzi, ndị nne na nna na ụmụaka kwesịrị ịgwa onwe ha ihe ọghọm dị. A pụkwara ikpe ndị pals na-ekerịta ihe oyiyi ndị na-ekwesịghị ekwesị ndị ọzọ nyere ha.
Onyinye wardgwọ hasgwọ ewepụtala atụmatụ mmụta maka ụlọ akwụkwọ gbasara iwu na mpaghara a. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, biko kpọtụrụ onye isi anyị na mary@rewardfoundation.org maka ozi ndị ọzọ.
<< Na-egwu egwu Mmekọahụ n'okpuru iwu England, Wales & NI >>